Siyaabo Free inuu ka soo kabsado Xogta macruufka Devices ee Mac OS X Mavericks
> Resource > macruufka > Free Siyaabo inuu ka soo kabsado Xogta macruufka Devices ee Mac OS X El Capitan
Ayaa laga badiyay xogta ku saabsan qalabka macruufka? Waxaad tahay meesha hadda. Maqaalkani waxa uu doonayaa inuu kula siyaabo qaar ka mid ah lacag la'aan ah inuu ka soo kabsado xogta macruufka ee Mavericks wadaagaan. On Read oo isku day sida ugu haboon ee aad u.
Habka Free 1: Ladnaansho xogta macruufka ee Mavericks ka Lugood gurmad
hab Free 2: Ladnaansho xogta macruufka ka iCloud
Habka Free 1: Ladnaansho xogta macruufka ee Mavericks kaga imaanayo Lugood
Inta badan macruufka isticmaala qalab waxay u isticmaalaan Lugood iyadoo tababare xogta ah, si ay u abaabulaan xogta ay iPhone, iPad iyo iPod taabto. Sida xaqiiqadu, Lugood ay abuuri karaan gurmad ah u qalab kasta macruufka marka aad u hagaagsan qalabka la. Sida caadiga ah, qalab kasta waxa uu leeyahay hal gurmad file. Lugood cusbooneysiin doonaa gurmad marka aad mar kale u hagaagsan qalabka la, halkii ay guud ahaan ka gurmad file cusub. Sidaa darteed, waxaad u baahan tahay si ay u joojiyaan syncing qalab aad la Lugood, marka aad badiyay xogta macruufka.
Waa mid aad u fudud inuu ka soo kabsado xogta macruufka ee Mavericks kaga imaanayo Lugood. Raac tallaabooyinka hoose:
Tallaabada 1. Dami u hagaagsan auto ah
Ka hor inta aadan qalab macruufka xidhmaan kombiyuutarka, waxaad u baahan tahay in ay dami u hagaagsan auto ugu horeysay, ka hortagga gurmad ka loo updated. Way fududahay: Open Lugood <Tag rabtid ... <Riix Devices . Fiiri sanduuqka hore ee Tilmaanta: Ka hortag iPod, iPhone, iPad iyo ka syncing si toos ah . Markaas riix OK button.
Tallaabada 2. Isku qalab macruufka iyo soo celin gurmad ka Lugood
Hadda, in aad Mac ku xidhi kartaa qalab aad walwal aan wax. Marka qalab aad waxa lagu ogaan karaa Lugood, xaq riix Qalabka menu dhinaca bidix ee suuqa. Markaasay aad arki doonaa liiska menu. Dooro iyo guji on this mid ka mid ah: Soo Celinta ka kaabta ... . Markaas hore files gurmad la soo bandhigi doonaa. Mid aad rabto Dooro iyo ku celin.
Haddii aadan rabin in la soo celiyo gurmad oo dhan oo la siiyo oo dhan xog jirta ee ku saabsan qalab aad, waxa kale oo aad eegista soo kaban karto xogta aad rabto in aad ka gurmad Lugood ah, akhriso hagahaan ee qalab hoosta:
Dadka isticmaala iPhone Dadka isticmaala iPad Wixii iPod users taabashada
Waraaqda kaabta Lugood for Your iPhone Ka kaabta iPhone Soo Celinta iPad Raadi iyo View Lugood ee kaabta faylasha
Ka kaabta iPad Soo Celinta iPhone Waraaqda kaabta iPad
Habka Free 2: Ladnaansho xogta macruufka ka iCloud
Haddii aanad waligaa hadda synced qalab macruufka la Lugood hor, ama aadan haysan dhawaan gurmad file, habka ugu horeysay ee aan ka shaqeyn lahaa aad u. Markaas waxaad isku dayi kartaa sidan: inuu ka soo kabsado xogta macruufka aad ka iCloud.
Tallaabada 1. masixi oo dhan content iyo goobaha ku qalab aad
Si aad u soo kabsado xogta macruufka ka iCloud, waxaad u baahan tahay in ay dib qalab aad warshad goobaha default: Tag Settings < General < celi . Riix ikhtiyaarka ah oo dhan masixi Content iyo Settings . Markaas riix masixi iPhone si loo xaqiijiyo in hawlgalka.
Xogta Tallaabada 2. Soo Celinta macruufka aad kaga imaanayo iCloud
Markaasay bilaabi qalab aad, qaadashada iPhone sida halkan tusaale. Waxaad arki doonaa fursadaha muuqashada shaashadda aad iDevice. Dooro ee Soo Celinta ka kaabta iCloud .
Haddii hab ma kor ku xusan kuu shaqeeya, waxaad u baahan tahay inuu ka soo leexdo in software-saddexaad caawimaad, si toos ah iskaan qalab aad u soo kabsadaan xogta macruufka ee Mavericks. Waxa kale oo jira siyaabo badan. Kaliya dooro Hanuuniye haboon ee aad u hoose oo guji linkiga si ay u akhriyaan hadda.
Ka iCloud Soo Celinta iPhone Undelete iyo Samatabbixinta Khasaaray Xogta iPad iPod xiriiri Data Recovery
Kabsado iPhone Data aan kaabta iPad Data Recovery Kabsado tirtiray iPod xiriiri Files
IPhone dhintay Data Recovery Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray iPad Data Undelete on iPod taabashada